Izindawo Ezihamba Phambili Ezokubhejela Ezemidlalo eNingizimu Afrika 2022
Ikhaya / izindawo ezihamba phambili zokubheja ezemidlalo e-inthanethi eningizimu afrika
Izindawo ezihamba phambili zokubheja ezemidlalo e-inthanethi eNingizimu Afrika
Ezweni elihlanyiswa ngezemidlalo njengeNingizimu Afrika, ukubhejela ezemidlalo kanye namaqembu owathandayo yindlela edumile yokuchitha isikhathi. Ukubhejela ezemidlalo kuyimboni enkulu, kodwa ama-sportsbook angcono kakhulu atholakala ku-inthanethi kumasayithi anamalayisense okubhejisa aseNingizimu Afrika. Ngenxa yobuchwepheshe beselula abantu baseNingizimu Afrika bangabuye babheje behamba kuma-smartphones abo nama-tablets.
Kodwa uzokwazi kanjani ukuthi ungawafuna kanjani amasayithi okubhejela ezemidlalo ahamba phambili e-SA?
Leli khasi lihlanganiswe ukukubonisa ukuthi ungakhetha kanjani indawo efanelekile kuwe yokubheja. Liletha uhlu lwamanye amasayithi amahle kakhulu abuyekezwe yithimba lethu elinolwazi, ukuze wazi ukuthi ngabe isayithi yokubhejela ikufanele yini. Ithimba lethu likunikeza isibuyekezo sephakeji yonke – izindlela zokukhokha nge-ZAR, amabhonasi, izinkokhelo, usizo lwamakhasimende nokunye mayelana neselula, ukubala nje izici ezimbalwa.
Futhi, leli khasi lihlola ezinye zezici zokomthetho zokubheja ku-inthanethi, ukuze ingqondo yakho ikhululeke.
Uma ufuna ukwazi konke okumele ukwazi mayelana nokubhejela ezemidlalo eNingizimu Afrika, qhubeka ufunde!
125% Webhonasi Elinganayo Ize Ifike R2210
Amabhonasi namaPhromoshini atholakala Kumasayithi Okubhejela Ezemidlalo aseNingizimu Afrika
Enye yezinzuzo ezinkulu zokubheja ku-inthanethi yithuba lokuthola izinhlobo eziningi zamabhonasi namaphromoshini. Noma ngabe ukuphi ohambweni lwakho lokubhejela ezemidlalo, uzohlala uthola ibhonasi eyenzelwe wena.
Amasayithi okubheja azozama ukukuheha ngamabhonasi okubhalisa uma umusha kuplatifomu yawo. Abasebenzisi abakhona bangabheka ngale kwamabhonasi okukwamukela ukuthola amaphromoshini athile abafanele.
Futhi kuhlala kukhona amaphromoshini aqondene nomdlalo aguquka njalo, kuya ngomcimbi wezemidlalo nesikhathi sonyaka.
Kubalulekile ukubheka ngale komsindo wokumaketha iphromoshini ngayinye nokuthi ufunda amagama amancane. Lokhu kuqinisekisa ukuthi uthola isivumelwano esifinyelelekayo. Ithimba lethu lihlale liqaphile ukuthola amabhonasi amahle, aphephile namaphromoshini asethsenziswa abantu baseNingizimu Afrika ababhejela ezemidlalo.
Amabhonasi Okukwamukela: Isayithi yokubheja ezemidlalo eku-inthanethi ikwemukela ngebhonasi lapho ubhalisa kanye nediphozithi yakho yokuqala. Idiphozithi yakho ilingana nephesenti elithile, ukuze ezikhathini eziningi, iphindwe kabili. Isibonelo esihle sebhonasi yokukwamukela u-100% webhonasi elinganayo ize ifike ku-R2000. Okungcono, uma wenza idiphozithi yenani lokugcina, uzoba no-R4,000 wokubheja!
Amabhonasi Ediphozithi Engekho /Ukubheja Mahhala: Ngezinye izikhathi isayithi yokubheja ikuvumela ukuthi uzame ipulatifomu yayo mahhala, ngaphandle kwesidingo sokwenza idiphozithi. Mane ubhalise bese uthola imali yamahhala yokuzama isayithi! Leli yithuba elihle lokuhlola imali ongayiwina nesofthiwe ngaphandle kokusebenzisa imali yakho ekuqaleni. Futhi okuwinile uyakugcina!
Amaphromoshini Ekheshi-Ebuyiselwe: Awusoze uhlale uwina kumasayithi okubhejela ezemidlalo. Kepha noma lokhu kwenzeka, enye yemali yakho izohlala igcinwe ivikelekile ngamaphromoshini ekheshi-ebuyiselwe. Isayithi yokubheja ezemidlalo ku-inthanethi izokuthembisa ukubuyisela amaphesenti athile emali oyilahlekelwe (isb. 20%), ukuze ingxenye ethile ibuyiselwe ku-akhawunti yakho ngaso sonke isikhathi.
Eminye Imihlobo Yamabhonasi: Uma kunomcimbi wezemidlalo omkhulu, ungabheja ukuthi uzothola amaphromoshini amaningi nezipesheli ezimayelana nalo mcimbi! Amasayithi okubheja anamaspesheli esonto nempelasonto, futhi avuza abadlali uma bemema abangane kuplatifomu.
Indlela Ukubhejela Ezemidlalo Esebenza Ngayo Eningizimu Afrika
Ukubhejela ezemidlalo kukhulu kakhulu eNingizimu Afrika futhi kulinganiselwa ukuthi le makethe iyokhula iyedlule u-R11 billion ngo 2023. Abadlali baseNingizimu Afrika banemidlalo eminingi abangayibhejela, kubandakanya imicimbi yakuleli neyamanye amazwe omhlaba, kusuka kokudume kakhulu kuye kokungaziwa. Ukubheja okuvamile e-SA ama-lottery kanye nemidlalo ebukhoma.
Abantu baseNingizimu Afrika nabo bangabheja ngezindlela ezihlukile, kusuka ekungeneni esitolo kuye ekubhaliseleni kusayithi yokubhejela ezemidlalo ku-inthanethi nokudlala kumasayithi okubhejela ezemidlalo ngamaselula.
Ukubheja ezemidlalo ku Inthanethi vs Ukubheja bukhoma
Ukubheja Kwezemidlalo Ku iNthanethi
Ukubheja Bukhoma Ku iNthanethi
Incazelo: Ukubheja imicimbi yezemidlalo. Isayithi ifaka amathuba okuwina bese abadlali babheje. Ngemuva komcimbi , bayahlola ukubona noma bawinile kanye nokukhipha imali. Incazelo: Kuyafana nokubheja ku-inthanethi (bheka incazelo). Umehluko ukuthi ubheja ngenkathi umdlalo udlalwa. Ukubheja bukhoma kutholakala kumidlalo enjenge bhola, ithenisi, imijaho yamahhashi, ibhola lombhoxo kanye nekhilikithi.
Amathuba okuwina abalwa ngokuya ngezingozi ezihambisana nomcimbi (isb. Amathuba okuthi iNgilandi iwine iNdebe yomhlaba). Amathuba okuwina abalwa ngokuya ngezinhlobo ezimbili Zokubheja Bukhoma- Ukubheja sewuqalile-umdlalo nokubheja umdlalo udlalwa. Ukubheja sewuqalile-umdlalo, Ukukbheja ngenkathi umdlalo usenzakala. Amathuba okuwina ashintsha ngokushesha, ngenkathi ibhola lithathwa ngelinye iqembu. Kungcono ukusebenzisa isewula.
Ezinye Izindlela Zokubheja Noku Gembula ku-iNthanethi
Ungathola uhlu lwezinto zokubhejela kumasayithi okubhejela ezemidlalo ku-inthanethi – futhi hhayi konke okubandakanya ezemidlalo! Uma uzizwa uthanda ukuthatha ikhefu ekubhejeleni kwezemidlalo kodwa usafuna ukuthola imivuzo ethile, bheka ezinye izindlela zokubheja nokugembula ku-inthanethi ongazithola.
Uyakholwa noma cha, ukubheja emincintiswaneni yamageyimu evidiyo kuyinto. Bheja ngokukhetha umuntu / iqembu elingawina umdlalo noma umcimbi.
Uzothola ukuthi iningi lama-sportsbook aqukethe ama-lotto akuleli nawamanye amazwe. Uzomane ubheje ngezinombolo ezidwetshiwe bese ukhokhelwa ngokufanele.
Ungabheja emicimbini yezimoto zomjaho kumasayithi okubhejela ezemidlalo aseNingizimu Afrika, ngezinhlobo eziningi zezinhlobo zokubheja namanani onikezwayo.
Imidlalo Ebukhoma Nokubhejela Ezemidlalo Okwengeziwe
Uma ufuna ukuba yingxenye yemidlalo, ayikho indlela engcono yokubheja kunokubhejela imiphumela engaphakathi kwegeyimu. Ingxenye engcono kakhulu ukuthi ungakhetha imicimbi eyenzeka endaweni yangakini noma emhlabeni jikelele nganoma yisiphi isikhathi esithile futhi ujabulele imigqa yokubheja ebukhoma.
Imidlalo Eyaziwa Kakhulu e-SA Yokubhejela
Cishe yonke imidlalo ethandwayo – futhi nengathandwa kangako – itholakala kumapulatifomu okubhejela ezemidlalo aseNingizimu Afrika. Le yimidlalo ozothola amathuba okuwina ezindaweni ezingcono kakhulu zokubhejela ezemidlalo zaseNingizimu Afrika.
Umdlalo obhekwa kakhulu emhlabeni yibhola likanobhutshuzwayo (ibhola). Kusobala ukuthi abantu baseNingizimu Afrika bazobhejela ku-Premier Division nasemicimbini emikhulu yezinkomishi, kanye nemincintiswano yamazwe omhlaba njengeNdebe yoMhlaba. Izinhlobo zokubheja ibhola likanobhutshuzwayo ziningi futhi zibandakanya izindlela zokufaka imali ezinqamula kathathu, zisekela ithuba eliphindwe kabili nokunye okuningi.
Abantu baseNingizimu Afrika bathanda ukubhejela amahhashi, kubandakanya izinhlanga ezintathu eziyinhloko ezenziwayo unyaka ngamunye – i-Summer Cup, i-J & B Met kanye ne-Durban July. Umjaho wamahhashi kusase yindlela yokuchitha isizungu ethandwa kusukela kuma 1700s, futhi namuhla kubhekwa kuyimboni yezigidi zamarandi. Abadlali bangabheja emijahweni yakuleli, noma emakhulwini yemiqhudelwano yamazwe eqhutshwa unyaka nonyaka.
Umbhoxo uthandwa emhlabeni wonke, kodwa unendawo ekhethekile ezinhliziyweni zabo bonke abantu baseNingizimu Afrika. Imibala eluhlaza okotshani negolide edumile yamaBoks yanele ukuthumela noma ngubani egijima ukuyobhejela umdlalo webhola lombhoxo ngomzuzu. Yebo, ibhola lombhoxo aligcinelwe kuphela iNingizimu Afrika futhi kukhona imidlalo eminingi eyenzeka ngaso sonke isikhathi, emhlabeni wonke.
Noma yini oyithandayo, uqinisekile ukuthola imidlalo oyithandayo ozobhejela kuyo kumasayithi okubheja.
Eminye ethandwayo ibandakanya:
Ukubhejela Ezemidlalo SA – Izindlela Zokudiphozithi Nokukhipha Imali
Uma uvula i-akhawunti esayithini yokubhejela ezemidlalo yase-SA, enye yezinto zokuqala okufuneka ukwenze ukufaka idiphozithi. Ukuze wenze kanjalo, uzofuna ukukhetha indlela yokubhenka ephephile, elula futhi esebenza kahle eNingizimu Afrika.
Izindawo ezingcono kakhulu zokubheja ezemidlalo yilezo ezinikezela ngezindlela ezahlukahlukene zokubhenka ezihlangabezana nakho konke okufunekayo nokuningi.
Ngokufanayo, isayithi ifanele inikeze abadlali izindlela zokukhipha imali ezivumela ukufinyelela okusheshayo emalini oyiwinile, ezihlakaniphile futhi ezivikeleke kakhulu.
Akunakuphikwa ukuthi ama-sportbook aseNingizimu Afrika kufanele amukele izinhlobo eziningi zemali, okusobala yi-ZAR (Amarandi). Iningi lamasayithi okubheja anikeza:
I-SID Instant EFT
I-Skrill (yayaziwa nge-Moneybookers)
Ukubhejela Ezemidlalo Nge-inthanethi eNingizimu Africa
Sezidlulile izinsuku kufanele abantu baseNingizimu Afrika baye ngqo endaweni okune-sportsbook ukuze babhejele imicimbi abayithandayo. Ukushintshwa kokubhejela ezemidlalo ku-inthanethi kudale imboni entsha enenzuzo enkulu, futhi kwashintsha kwaba ukubhejela ezemidlalo ngeselula.
Letha bonke ubumnandi bokubheja bukhoma nomaphi lapho ukhona, ngenxa yegama lokugcina kubuchwepheshe beselula.
Wonke ama-odd emidlalo ethandwa kakhulu ayatholakala kalula eminweni yakho. Vula i-akhawunti ekhasino usebenzisa iselula yakho ephathekayo, noma ungasebenzisa ideskithophu PC yakho. I-akhawunti efanayo ingasetshenziswa kuwo womabili amapulatifomu.
Uma usungene ngemvume ku-akhawunti yakho, ungasebenzisa i-app yakho yokubhejela ezemidlalo ukwenza idiphozithi, ukuthatha amabhonasi namaphromoshini, ukukhipha imali oyiwinile, ukukhuluma nosizo lwamakhasimende nokubheja.
Ama-App Okubheja Kuselula
Noma izindawo eziningi zokubhejela ezemidlalo zikuvumela ukuthi ufinyelele kupulatifomu yazo ngesiphequluli seselula yakho, abantu baseNingizimu Afrika bakhetha ukudlala kuma-app asheshayo, abushelelezi ukusebenzisa kanye nesipiliyoni esihle sokusebenzisa. Ukubheja umdlalo-udlalwa, ikakhulukazi, kujabulisa kakhulu uma usebenzisa i-app yeselula.
Abasebenzisi bedivayisi ye-Android: Vakashela isitolo se-Google Play, khetha i-sportsbook oyithandayo bese uyidawuniloda ngokushesha futhi mahhala ku-Galaxy Nexus yakho, ku-Google Pixel noma kunoma iyiphi enye idivayisi esebenzisa i-Android.
Abasebenzisi bedivayisi ye-Apple: Nakuba ama-bookie enikela ngamasayithi ahambisana namadivayisi e-Apple afana nama-iPad, iPod, neminye, ama-app okubheja angadawunilodwa ku-iTunes ukuze ube nesipiliyoni esingcono. Ungawathola futhi ama-apps kusayithi yokubheja eku-inthanethi.
Amathiphu Okubhejela Ezemidlalo
Dlala ngokuzibophezela futhi ugembule ngokuhlakanipha. Ukubhejela ezemidlalo kumayelana nokuzijabulisa futhi imali oyiwinayo iyibhonasi. Ungalweli imali oyilahlekelwe noma ugembule imali ongakwazi ukuyilahlekelwa. Uma uzwa sengathi unenkinga yokugembula, thinta inombolo yosizo ye-National Gambling Board Programme 24/7 ku-0800-006-008.
Qala ngokubheja imali encane ,ikakhulukazi uma kuyisikhathi sakho sokuqala ukudlala. Kuthatha isikhathi ukufunda amasu okuwina futhi isikhwama sakho sincane.
Yiba umpetha emdlalweni owodwa. Nakuba kunemidlalo eminingi ongabhejela kuyo, zama ukuletha uthando lwakho lwangempela kulokho okuthandayo ezikhathini zakho zokubheja kwezemidlalo. Lapho ususazi okwengeziwe ngeqembu noma umuntu ozomkhetha uma ubheja, uba namathuba aphezulu okukhetha umwini.
Dlala kumasayithi anconyiwe aphephile. Bheka uhlu lwethu lwezindawo zokubhejela ezemidlalo ezinamalayisense, eziphephile nezilungele iNingizimu Afrika.
Kusebenza kanjani ukubhejela ezemidlalo?
Ama-Bookie asungula izimakethe ngemiphumela ehlukene ngesikhahti somcimbi wezemidlalo, Njengebhola noma umqhudelwano we thenisi. Ama-odd ahlelwa ngaphambi kwomcimbi, Futhi zingashintsha ngaphambi noma ngesikhathi somcimbi. Abadlali babheja lawa ma-odds, Bathole inani inani elibhejiwe liphindaphindiwe ama-odd. Uma ama-odd ephezulu, uwina imali ephuzulu.
Ingabe Ukubhejela Ezemidlalo Kusemthethweni ENingizimu Afrika?
Yebo kusemthethweni. Abantu base Ningizimu Afrika bangabheja kuma bookie anamalayisense, ezitolo noma ku-intanethi.
Ungawina kanjani ekubhejeni kwezemidlalo eNingizimu Afrika
Yazi imidlalo obheja ngawo kakhulu ukukusiza ubheke ngokufundile; Gembula ngokuhlanipha ukuze unciphise ukulahlekelwa kwemali; Namthela ezindaweni eziphephile, ezinconyiwe zokubheja ezemidlalo.
Ngiyihlola kanjani imiphumela yokubhejela ezemidlalo, amathiphu nemidlalo?
Yonke imiphumela yokubhejela ezemidlalo, amathiphu nemidlalo kufakwa ezindaweni zokubheja ezemidlalo zase Nginizimu Afrika.
Yimaphi amabhonasi atholakalayo okubhejela ezemidlalo
Abalandeli bokubheja bangakhetha kuhlu olukhu lwamabhonasi, Kusuka kuma bhonasi angadingi idiphozithi, Ama bhonasi okukwamukela, noku bheja kwamahhala, Ukukbuyiselwa kekheshi namabhonsi agxile kumicimbi yezemidlalo ekhthekile.
Yini Umehluko Phakathi Kokubhejabukhoma nokubhejela ezemidlalo
Uma sithi ukubhejela ezemidlalo, Kusho ukuthi sibhejela umphumela womcimbi ngaphambi kokuba kwenzeke. Uma sibheja bukhoma, Sibheja lapho umdlalo udlawa, Futhi ama-odd ashintsha ngaso sonke isikhathi.
Ngingabheja Kuselula Yami?
Impela unagkwazi. Amasayithi okubheja ezemidlalo ku-inthanethi angadlawa kusiphequluli seselula yakho noma kuma-app eselula yakho (Angadawunilodwa mahhala ngokushesha).